Nina Paley na Software efu efu efu maka Vector Animation | Site na Linux
Nina Paley na Echefuola Vector Animation Free Software
mgbochi | | Aplicaciones, Imebe, Noticias, Ndị ọzọ
Mpaghara nke eserese eserese bụ mpaghara nwere ọtụtụ ọdịiche na sistemụ GNU / Linux. Mgbe blender nwere ikike zuru oke iji lụso nnukwu mmemme mmemme, onye editọ foto anyị, GIMP, Enweghị nkwado CMYK. Patternkpụrụ a na-ekwughachi onwe ya mgbe niile na vector abụghịkwa otu. Inkscape Ọ bụ a pụtara mepụtara software, na arụmọrụ nsogbu n'elu niile. Dịka onye ọrụ na-emegharị, enwere m ike ịsị na ọ na-emezu atụmanya m ma na-egbo mkpa m, nke na-abụghị ọtụtụ.
Ma abughi m ọkachamara n’ichepụta ihe. Ọ bụ ezie na enwere ihe atụ nke ndị na-emepụta ihe na-eji sọftụwia na-akwụghị ụgwọ na ọrụ ha (olee otu Mairín Duffy, Joaclintma ọ bụ Jesus David) Ọ bụ ihe a na-anụkarị gbasara mkpesa nke enweghị ọrụ ụfọdụ. Okwu ikpe nke masịrị anyị taa: vector animation.
Nina paley bụ onye na-eme egwuregwu, onye na-ese foto na onye omenkà na-arụ ọrụ ma na-akwalite ọdịbendị n'efu. O weputala oru ya n'okpuru ikikere Creative Commons-Attribution-Share-Equal license, tinyere ihe onyonyo ihe onyonyo si na 2008: Sita Bụrụ Onye Bad. Na ederede a ọ na-eme mkpesa banyere enweghị sọftụwia na - akwụghị ụgwọ maka edezi na imepụta ihe nkiri eserese kwesịrị ekwesị yana ọ nweghị ihe kpatara mkpali ọ nwere maka ịrịọ maka ya. Chọrọ ngwanrọ ị nwere ike iji ma tụkwasị obi dị ka ihe nkiri profesional Kedu ihe ọ bụ. Ihe na-enye ohere ka echekwa ọrụ gị n'oge ma zere faịlụ iyi Flash nke anaghịzi arụ ọrụ na nsụgharị ọhụrụ.
Ma, ka anyị burugodị ụzọ leba anya n'ihe ị na-eme. Ekwuru m ya na mbụ Inkscape ọ gboro mkpa m dị ka onye na-ese foto oge ụfọdụ. Onye ọ bụla soro ya rụọ ọrụ ga-amata na ọ na-eji ọkọlọtọ SVG eme ihe maka ịchekwa. Na SVG na-akwado animations. Ya mere, anyị edozila nsogbu nke mbụ anyị, ebe ọ bụ na ọ dịghị mkpa ichepụta usoro ọhụụ maka akụkụ eserese nke ọrụ ahụ. Ma Inkscape Ọ enweghị ike idezi eserese na ọ bụ ezie na ọ nwere ike, ọ bụghị ebe kacha mma ịme ya, ọ nweghị ngwaọrụ dị mkpa maka njikwa oge na vidiyo. Na mgbakwunye, mbọ ndị Inkscape ga-eme n'ọdịnihu ga-elekwasị anya na nkwado 3D karịa mmemme.
Paley na-agwa anyị ihe bụ njirimara nke onye ndezi nrọ a. Nlebara anya pụrụ iche mgbe a bịara n'ihe ngosi eserese:
Flash 8-dị ka usoro iheomume
Mbugharị anya na usoro iheomume
Ramtọ asụsụ nke «akara», ebe ndị a nwere ike na-animated na kpara
Ezi vector ịbịaru ngwaọrụ
Sara mbara nhọrọ mbupụ vidiyo
Mwere mkpebi ahụ
Ebe ndebanye aha nwata na nwa
Omenala vector border (n'ofè dashes na ntụpọ)
Mbupụ na SVG
Ole na ole chinchi
Imirikiti ọrụ ndị a dị na blender, nke nwere onye nchịkọta vidiyo na-emeri nke onwe ya. Featuresfọdụ atụmatụ dị oke egwu, dị ka "ọkpụkpụ," nke ma ọ bụrụ na ha na-arụ ọrụ n'ụzọ yiri nke ahụ blender, ga-ekwupụta agwa ma nye anyị ohere ịme ya. Ma debatable dị ka nkebi ahịrịokwu ahụ bụ Abụ m pragmatist na abụghị purist N'ihe banyere nkwado Mac na akwụkwọ mbụ, anyị nwere ike ịnwe mgbe ọ bụla ị rịọ maka ngwanrọ ngwanrọ, nke na-enyere aka ịnakwere usoro dị ka GNU / Linux. Mụ onwe m gara otu okwu blender (Anyị nwere ike iji ụbọchị ahụ dum na-ekwu banyere ya, mana ọkwa ya dị ka ikike na mmegharị bụ ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha) ebe ndị ọkà okwu na-arụ ọrụ na Mac. Na-agba ọsọ n'ebe ọ bụla, ọ ka bụ sọftụwia n'efu.
Ma ọ tụnyekwara anyị bọmbụ ahụ. Ọrụ dị otú ahụ chọrọ, dị ka ya si kwuo, otu nde dollar. 1 nde US dollars, ọ bụ ezie na ọ na-azọrọ na ọ ga-edozi otu narị puku Ọ ga - ekwe omume maka ọrụ dị otú ahụ ịnakọta ọnụ ọgụgụ ndị a na Kickstarter? Na igwe-ego ọ ga-ezuru? Ebe na-amalite site? Anyị chọrọ nke a ugbu a? Ndị a bụ ajụjụ m chọrọ ịjụ taa, n'ihi na echere m na ha na-egosipụta ngwanrọ nke ngwanrọ n'efu na oke mmiri nke agbụ.
Anyị anụbuola banyere ọrụ ndị ruru ọnụ ọgụgụ nde mmadụ na Kickstarter, na-echekarị ngwaọrụ nke teknụzụ. Site na mkpali ziri ezi, $ 100,000 adịghị ka onye dị oke ọnụ ma emechaa. GNU MediaGoblin kụrụ 42,000 na ngwa ngwa; ya mere mkpọsa na-enweghị oge nwere ike ime ka atụmanya anyị mezuo. Isi ihe edozi.
Ọ bụrụ igwe-ego ezuola ihe ọzọ. Mgbasa ndị a kwesịrị inyefe ndị ahịa ha onyinye. Anyị nwere ike ịdọrọ ezigbo ego site na anụmanụ ndị anakọtara, t-shirts, ihe ụtọ na obere ihe ndị ọzọ, yana mmefu nke ndị mmepe, dị ka ọkụ eletrik, hapụ ọrụ ha ma debe ebe ọrụ ha na-anọ ebe ahụ. Nke ahụ na-efu. Ihe oru ngwanrọ na - akwụghị ụgwọ kwesiri ibido iwukwa ya maka ihunanya nka ma bido n’echiche maka ụdị azụmaahịa nyere ha ohere ise n’elu. Ọzụzụ bụ ihe na-abata m n’uche. Cheta na irere ngwanrọ na-akwụghị ụgwọ zuru oke na ụkpụrụ ụkpụrụ dị n’azụ ya. A na-edozi ọkara abụọ. Ọ bụ n'oge a ka nnukwu echiche na-anwụ na akwụkwọ.
Enwere usoro mmemme akpọrọ Synfig maka nke a. O doro anya na, ọ dịghị edozi mkpa nke ndị ọkachamara. Na-etolite a ndụdụ Site na isi koodu di ugbua okwesighi ibu nsogbu, obu ezie na inye onyinye ego maka mmepe nke ihe omume a nwere ike ibu ihe di nma. Kwụsị itinye mgbalị n'ime ihe ọhụrụ wee jiri ihe ị nwere mee ihe. Ikekwe. Isi okwu nke atọ, o doro anya na edozila m, ọ bụ ezie na enweghị m ike ikwenye na ọba akwụkwọ ọfụma ejiri eme ihe.
Azịza nye ajụjụ kasịnụ bụ ee. Anyị chọrọ nke a ugbu a? Eee.Anyị chọrọ ngwa ọrụ anyị nwere ike ịtụkwasị obi ọzọ, n’agbanyeghi n’elu ikpo okwu. Onye na-eme ihe nkiri ahụ ga-enwe ike ịlọta ụlọ site ogologo ụbọchị ọrụ ma nọdụ ala na-eji otu mmemme na igwe ụlọ ya dezie otu ụdị faịlụ ahụ, ọbụlagodi na kọmpụta ọrụ ya bụ Mac nke afọ na kọmpụta nke ya kọfị onye na-agba ọsọ Ubuntu. Ma obu uzo ozo.
Anyị kwesịrị ịtụkwasị ngwaọrụ anyị obi ọzọ dịka m tụkwasịrị obi pensụl m. Tụkwasị ya obi na ị gaghị arara m nye n'agbanyeghị na ịmara na ị ga-ada. Pensụl m ga-atụfu isi ya Inkscape njehie ga-apụta. Mana enwere m ike ịtụkwasị obi na ọrịa strok m, vektọ ma ọ bụ na graphite, ga-enwe ike mepee 2, 3 ma ọ bụ 10 afọ n'ọdịnihu, n'ihi na enwere ụkpụrụ dị n'azụ ya, na-eme ka ọ dịkwuo mma yana na nkwa nke opekata mpe m ga-echekwa akwụkwọ ochie . Ọ bụrụ ọrụ m ma ọ bụ ihe omume ntụrụndụ m.
Ọ bụghị naanị ịmepụta ngwanrọ iji dochie onye nwe ya, n'ụdị ụdị nke kpochapụla nke iche onwe ya na agwaetiti ahụ n'efu. Ime sọftụwia dị ka nke a juputara na ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ nwere ike isi wee sie ike. Nke a bụ oke mmiri nke agbụ m na-ekwu maka ya na mbụ, site na nke naanị ihe ọhụụ na nnwale nwere ike ịdọrọ anyị. Na ntụkwasị obi.
Site ebe a, m na-agba gị ume ịjụ onwe gị ma ị tụkwasịrị ngwaọrụ gị obi. Nke ahụ bụ maka m bụ isi uru nke ngwanrọ n'efu. Iji nwee ike ịtụkwasị obi ọzọ. Taa bụ maka ihe nkiri vector na echi bụ maka akpaaka ọrụ, njikwa kọmputa ma ọ bụ gburugburu desktọọpụ. Ntụgharị uche anyị banyere ọdịnihu ga-amata na e debere nkume mbụ taa. Ka-etinye nkume mbụ nke free software taa mgbe ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Nina Paley na Echefuola Vector Animation Free Software
Abụ m Visual Artist na m mepụtara na ubi nke web na isiokwu imewe na a ọkachamara ụzọ, m na-eji free software, gụnyere Operating System.
Agbalịrị m ọtụtụ GNU / Linux OS na Ubuntu Enwere m nsogbu kwụsiri ike karịsịa na Unity, yana mmelite Debian na Fedora, Arch anaghị enwe mmekọrịta ọ bụla ma m wụnye ya ugboro ole na ole na eziokwu bụ na ọ na-akụda mmụọ ịrụ ọrụ na a dị ọcha ọnụ Puppy bụ ìhè ma ọ dị mkpụmkpụ.
Ka o sina dị, enwebeghị m ike ịhapụ onwe m na Windows, ọ ga-amasị m, mana dịka onye mmebe enweghị m ike tufuo Adobe na Corel, ngwa ngwa Linux ka anaghị enye obosara, nsogbu Inskape na CMYK bụ akara nke ọma, ọfụma n'eziokwu n'ihe niile gbasara njikwa agba, Gimp ka anaghị eme HDR, na Scribus enweghị nkwado ngosipụta ọfụma.
Na nkenke, Linux bụ atụmatụ dị ogologo oge na usoro nke imewe, echere m na ike bụ ihe na-enyere GNU / Linux aka, mana ọ na-aga n'ihu na-enwe nnukwu nsogbu, ọtụtụ sistemụ, ọtụtụ atụmatụ na enweghị mgbagha agbagha.
Ọ bụ eziokwu. O yighị m ka nkesa na-elekwasị anya na mkpa nke enweghị ike idozi ya na ngwaọrụ dị ugbu a yana na enwere mmemme abụọ dị iche iche ịme otu ihe naanị n'ihi na ha nwere ngwa ọrụ eserese dị iche.
Amaara m na ọ na-akụda mmụọ, mana nsogbu m bụ ntụkwasị obi anyị tinyere na mmemme ahụ. Site na nụ ihe amatara na mbugharị site na Freehand gaa na Illustrator bụ ihe jọgburu onwe ya nye ọtụtụ na mmepe mechiri site na ihe anyị nwere ike ịkọwa dịka isi ụlọ ọrụ ahụ. N'ụwa nke sọftụwia na - akwụghị ụgwọ, ọ bụrụ na mmadụ mere ụdị ihe ahụ, a ga - aghọrọ okwu na a ndụdụ a kwadokwara nke a n'ọtụtụ ebe.
Okwu a abụghị ịkwụsị ụdị di iche iche, kama ọ bụ iji wepụta azịza niile. Na ihe atụ Unity launcher menus nwere ike ịrụ ọrụ na KDE. Inweta nkwenye dị otú ahụ bụ olileanya anyị na ụwa nkewa.
Amaghị m otú ihe na Gimp na Inkscape si aga, mana ejirila m ma Blender na Maya kpụ ọkụ n'ọnụ, ha yikwara, ọbụnadị Blender nwere ọkwa kachasị elu n'ọtụtụ ngwaọrụ yana ịsụgharị ma n'ime ma ọ bụ n'èzí (dị ka POVray ) dị mma, ọ bụ naanị ihe m nwere ike ịkatọ banyere Blender bụ mbupụ nke eserese vector, ma na ụgbọ elu dxf yana na eserese svg dị mfe, nke na-abụghị ikpe na AutoCAD >> Maya (gịnị kpatara ya?), Ma ọ bụghị, A na-emegharị Blender ka mma maka mkpa m. Ọzọkwa (ma gosipụta) arụmọrụ nke Blender na nkesa GNU / Linux dị mma karịa na Windows.
"Ubuntu m nwere kwụsie ike nsogbu karịsịa na "dị n'Otu"
Pro mere pronas Linux Mint? N'ozuzu, ọ dị nnọọ ike karịa Ubuntu (ọ bụ ezie na 100% dakọtara), ngwa ngwa na ọkụ ọkụ ma nwekwaa desktọọpụ mara mma dịka KDE SC (ọkachasị maka ndị si na Windows afọ), Cinnamon ma ọ bụ Xfce.
"Na Debian na Fedora melite"
Ee, ọ bụ eziokwu, Debian Testing alaka sọftụwia adịkwaghị ochie, mana Fedora a na m eche ihe nsogbu ị nwere ma ọ na - arụ ọrụ ọfụma ma nwee sọftụwia.
»Njiko adịghị enyi na enyi»
Maka ndị ọrụ ole na ole gburugburu ụwa Arch dị ezigbo enyi, ị nweghị ihe ọmụma dị mkpa iji jiri ya? N'okwu a ọ bụghị na ngwaahịa ahụ adịghị enwe mmekọrịta mana na ị naghị eme ya enyi ma ọ bụ na ịnweghị ihe ọmụma dị mkpa iji jiri ya.
Ọ bụ ihe nzuzu, dị ka a ga - asị na: "747 anaghị enwe enyi, m ga - edebe igwe kwụ otu ebe m", claaaaro….
"Ma nke bụ eziokwu bụ na ọ na-akụda mmụọ ịrụ ọrụ na ọdụ dị ọcha,"
N'ezie, n'ihi ogo gị dị ka onye ọrụ njedebe, nye m ọnụ ya bụ panacea na n'eziokwu 85% nke iji igwe m na-eme site na Yakuake + tmux, ndị ọzọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere nke ngwa ngwa dị ka ihe nchọgharị weebụ. , ime ụlọ ọrụ, wdg.
"Na nkenke, Linux bụ atụmatụ dị ogologo oge dị ka imewe si chọọ,"
Echere m na ọ bụghị ogologo oge, ọdịdị nke ụdị maka GNU / Linux nke Lightworks (ọkachamara na-edezi vidiyo vidiyo) gosipụtara ya.
"Ma ọ ka nwere nnukwu nsogbu"
AHA!? Kedu? Na n'oge a enweghị ngwa nke na-egbo mkpa gị apụtaghị na o nwere "nsogbu siri ike", n'ezie ịntanetị dị taa dị adị maka ịdị adị nke GNU / Linux * ụkwara *
"Ọtụtụ sistemụ, ọtụtụ amụma na enweghị mgbagha nkewa."
Chọpụta, ọ bụ otu nzuzu na anyị na-anụ ndị zombies ndị na-eji Windows ọtụtụ afọ 😀
Ekwesịrị iji "iche iche" dochie "Fragmentation" site na ihe "otu nha anaghị adabara ihe niile". E nwere ọtụtụ puku ndị na-emepụta akpụkpọ ụkwụ, mouses, ụgbọ ala, ndị na-ese ihe dị iche iche ... kedu nkewa!
Ọ D MASGH MAS nna ukwu, iche iche, ọ dịghị nkewa.
N'ikpeazụ, Windows, MacOS, GNU / Linux, FreeBSD na ọtụtụ sistemụ arụmọrụ dị iche iche amụrụ nwere mkpa dị iche iche, lekwasịrị anya na ojiji a kapịrị ọnụ na ọtụtụ n'ime ha amalitela ịgbakọta n'otu ebe ahụ.
Windows na MacOS ịbụ sistemụ lekwasịrị anya na onye ọrụ njedebe site na mbido ma nwee ọtụtụ afọ na ahịa karịa nsụgharị nke Ubuntu, Fedora ma ọ bụ usoro GNU / Linux dị njikere iji rụọ ọrụ, ha nwere ọtụtụ ngwa zuru ezu maka ọtụtụ ọrụ ọ bụkwa ihe ezi uche dị na ya maka oge ha nọ na-emepe ha, ihe dị ka afọ 20.
N'okwu a, ọ dịkwa ama ama na gafere usoro sistemụ dị iche n'etiti Windows na MacOS, ngwa ndị otu MacOS nwere naanị otu oge na-arụ otu ọrụ ma ọ bụ ka mma na Windows, onye yipụla MacOS nke usoro ikpo okwu maka imewe site n'ịdị mma. . Ọ bụ eziokwu na ngwaahịa Apple ka nwere uru agbakwunyere nke njikọ SW / HW na nlekọta pụrụ iche na profaịlụ agba na sistemụ niile, ngwa, ngwaọrụ vidiyo na ndị na-ebi akwụkwọ taa ị ga-enweta otu nsonaazụ ahụ na otu ngwa ahụ na Windows. sistemụ - ya mere Apple kwụsịrị ịbụ ikpo okwu nke kacha mma maka ndị na-emepụta ihe ma n'eziokwu ruo ogologo oge gbalịrị itinye onwe ya dị ka ikpo okwu multifunction maka ndị ọrụ nke ụdị ọ bụla na-azọrọ nkwụsi ike ka ukwuu na nzuzu ndị ọzọ na Ọ nweghị onye leleela ndị fanboys ahụ.
N'aka nke ọzọ, a mụrụ GNU / Linux na FreeBSD dị ka sistemụ a raara nye gburugburu sava azụmahịa na ndị ọkachamara IT na netwọkụ, ebe ọ bụ na nso nso a nnukwu nnabata nke GNU / Linux na desktọọpụ na laptọọpụ, ya mere, Ọ BOGROG ỌR that na a ka nwere ebe ha na-egbu oge dị ka ndezi multimedia. Agbanyeghị, na maka ihu ọma ha, ỌMECMEC NKE ỌR BE NKE B THE N'THELỌ N'USLỌ NCHE na-eme ka ha bụrụ atụmatụ dị ka onye ọzọ nwere uto kachasị n'ọdịnihu ma n'ụzọ doro anya na nke a ga-esonyere ya site na mmepe nke ngwa ọrụ ndị dị mkpa iji kpuchie - uru dị oke mkpa - mkpa ya ọrụ. Ọ bụ eziokwu na GNU / Linux erubeghị na Windows ma ọ bụ MacOS na usoro nke ọtụtụ ngwaọrụ, mana ọ na-eru nso ọsọ ọsọ na mgbe nhazi nke GNU / Linux n'ikpeazụ rutere, gbakwunyere inwe ngwaọrụ ndị dị mkpa maka mmepe nke ndị ọkachamara na-ahọrọ ikpo okwu ga-etinye usoro penguuin ahụ dị ka nhọrọ tacit mgbe ị na-eji sistemụ arụmọrụ.
N'aka nke ọzọ, nsogbu ebighi ebi na oghere nchedo nke Windows, nke a na-ahụkarị na mmepe ya, pụtara na ọ gwụla ma edegharịrị ya ọzọ -a ọrụ titanic, agaghị ekwe omume ịrụ n'oge okwu na-eche na ị nwere ego iji mee ya - Nọgide na-abụ sistemụ arụmọrụ mediocre nke ndị ọrụ ya amaghị na ha ga-akwụsị iji - ma ọ bụ opekata mpe iji offline - ma ọ bụrụ na ha maara maka nsogbu ọ nwere.
Ekwela ka ekele onwe gị gbochie gị ịhụ ọhịa. Enwekwara ọtụtụ ihe na - agbagha m gbasara GNU / Linux na nke ahụ ga - eme anyị oge ọ bụla na sistemụ ọ bụla anyị ji ma ọ bụrụ na anyị emeghị ya.
Dị ka ọhụụ gị si dị, mmejọ ahụ dị n'aka onye ọrụ ọ bụghị usoro ahụ. Kedu ihe kpatara onye mmebe ma ọ bụ onye na-egwu egwu maka ọkachamara na nka na ọ bụghị na kọmputa? N'ikpeazụ ị na-akwụsị ikwu banyere oghere nche, sava, ngwa azụmahịa, na isiokwu ndị dị anya site na isiokwu nke post. Are kwenyere na ndị Linux kpọrọ asị "ihe ọmụma kọmputa dị mkpa maka Linux." Ọfọn mba, ịwụnye ubuntu ị na - etinye pendrive, aga m agwa gị na ọ dị mfe karịa windo, ebe ọ bụ na ịchọghị onye ọkwọ ụgbọala cd maka motherboard. Ọnụ ahụ bara uru maka ndị maara ya, ma iji Arch ma ọ bụ Gentoo. Dị mfe idepụta pụta -av firefox na ọ bụ ya, mana n'azụ nke a enwere ọnwa nke ọmụmụ, usoro mkpokọta na njikwa ọkọlọtọ, nke dị anya na ihe ọmụma nke onye na-ese ihe. Dị ka ha na-ekwu mgbe niile "Linux adịghị enwe mmekọrịta, mana ọ maara otu esi ahọrọ ndị enyi ya"
Chọọ maka ndị ọzọ ga - akwụ ụgwọ maka Flash Ọkachamara, Traktor (na ndị ọkwọ ụgbọ ala), ma ọ bụ Ableton Live. Apple nwere kernel siri ike ma dị elu, ihe ejiri Linux. Ọ bụ ya mere eji ya ọtụtụ afọ na multimedia, ọ bụghị na ọ mara mma (nke ọma, ụfọdụ ndị na-ahụ FB na-azụta ya maka nke ahụ: P). Ihe na-efu na Linux bụ mmemme, ntọala ahụ dịkwa mma.
Ndabere ya dị oke mma. Oge ụfọdụ gara aga, agụrụ m ihe atụ (ọ bụghịchacha) n'etiti Linux na Darwin ma ọ bịara doo m anya na Linux bụ kernel kachasị elu dị. GNU / Linux bụ impeccably mere usoro na-ele anya na ala elu. Ihe ngosi eserese nke ihu esiteghi ogologo oge (M na-ekwu maka ịkọwapụta ya n'ozuzu) iji maa jijiji site na mgbanwe mberede.
Ọ bụ eziokwu na ọtụtụ nhọrọ na-eweta ọgba aghara na ọ bụ ya mere m ji hụ echiche nke azịza dị ka olile anya n'etiti ihe a niile. Enwere m ike ịtụkwasị obi na ngwa m, amaara m na ọ bụrụ na LibreOffice na-etinye ụkpụrụ dị njọ taa (nke na-eme) mmadụ ga-eji ndụdụ ga-abịa napụta anyị, nke bụ Apache OpenOffice na nke a. Enwere m ike ịtụkwasị obi na ngwa ọrụ m n'ihi na ịbụ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ ha na - enweta ike dị egwu nke agaghị ekwe omume ịkwụsị yana nke ahụ bụ ajụjụ m chọrọ ịwelite na post.
Ọ bụrụ na anyị ahụ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ dị ka ihe kachasị mma nke ọdịbendị n'efu, mgbe ahụ anyị na - ahụ na mmemme ahụ ga - enwe ike ịkekọrịta, jiri, gbanwee, kesaa, ree na nnwere onwe ndị ọzọ enweghị ike ịbelata n'ihi na koodu isi dị. Nnwere onwe 0 bụ nnwere onwe elelị na nke ahụ bụ ihe m bịara ikwu ụnyaahụ.
Oo ezigbo oku na Desdelinux?
A oku na Sunday!
Sọnde bụ izu ike.
Nsogbu bụ isi na Inkscape bụ nkwụsi ike. Abụ m ọkachamara mmebe na vector ịbịaru bụ akụkụ dị mkpa nke ọrụ m. M na-eji Inkscape mana arụmọrụ ya adịghị nwayọ ma sie ike na ọrụ dị mgbagwoju anya. Ọbụnadị na atụmatụ, ọ bụ ọrụ dị mfe.
Gimp ọ bụ ezie na ọ dị egwu, ọ ka nwere "adịghị njọ" erughị eru, na m na uche ọ bụghị ndị 14 ibe n'ibe ma ọ bụ enweghị nke CMYK. Ọ bụrụ na ọ bụghị kama arụmọrụ. Ọ bụghị mmemme "agile" iji rụọ ọrụ. Enwere ọtụtụ nkọwa ga-egbu maramara (m na-ekwu ọtụtụ, achọghị m ịkọwapụta nke ọma).
N'agbanyeghị nke ahụ, enwere m obi ike na n'oge na-adịghị anya, a ga-edozi nsogbu ndị a, ma eleghị anya, na ọkara ma ọ bụ ogologo oge a ga-eme ka mmemme niile a dịrị n'otu n'ụdị imewe ebe ha na-ekerịta otu arụmọrụ dị elu nke anyị na-achọ site na mmemme ọkachamara ọ bụla (nke a bụ utopia).
Ọ bụ nkatọ siri ike, mana m na-ekwusi ike, onye na-arụ ọrụ na mmemme ndị a na-ekwu kwa ụbọchị ma na-ala azụ iji Photoshop, Corel ma ọ bụ ndị ọzọ m maara nke ọma mana na-agbachitere nkà ihe ọmụma nke ngwanrọ n'efu.
Anyi aghaghi inwe okwukwe !!!
You nwara "animata"? Ọ dị ezigbo mma ma dịkwa mfe iji, o nwere adịghị ike ma ọ na-emeju nke ọma maka ọrụ animation.
Naanị m lere ya anya na ọ na-enye m ezigbo mmetụta n'ihi otu esi eme nke ọma na peeji ahụ. Yabụ ahụrụ m na ọ dị naanị maka Windows na Mac. Enwere koodu mmalite, ihe bụ ihe. Daalụ maka ntinye agbanyeghị
"Ka anyị dina mbụ nkume nke free software taa mgbe ahụ."
Nke a bụ otu ihe edeturu si kwusi, ọ bụ ntakịrị ihe anyị na-ekwukarị, sọftụwia na - akwụghị ụgwọ chọrọ akọnuche karịa na kọmputa.
Utu akwukwo akwukwo akwukwo Pi